नेताको व्यथा | मझेरी डट कम
kbs — Tue, 06/24/2008 - 19:30
राजनीति पोखिएपछि घँैटो रत्तिो ढ्वाङ बन्छ । नमच्चिने पिङको सय झड्का भनेझँै रत्तिो ढ्वाङको आवाज चड्का ! जसै नेता महान् बन्छन्, ती कलशझैँ पुजिन्छन् । कलश र लोटामा काँधमाथि र कम्मरमुनि जत्तिकै भिन्नता छ । शक्तिबिनाको राजनीति रत्तिो घैँटो बराबर ! नेता शक्तिसहित र शक्तिरहित हुन्छन् । शक्तिसहितको नेता स्यालै भए पनि बाघको ओढारमा उभिँदा आफूलाई बाघ ठान्छ । शक्तिरहित नेता बाघै भए पनि जुँगा उखेल्दा पनि मरेको बाघझैँ बन्छ ।
शक्तिको लोलुपताबाटै राजनीति अर्थात् नेतागिरी प्रारम्भ हुन्छ । नेताको खेल भन्नु नै म्युजिकल चेयर हो । मानौँ, कुर्सी झिङ्गाका लागि कुनै अपचवालाले छाडेको वस्तु हो । हेर्नोस्, कुर्सी चारखुट्टे भए पनि यो जनावर होइन । यसको चार पाङ्ग्रा नभएकाले यो गतिवान पनि छैन । सायद गति दिन घुम्ने मेचवालाले पाङ्ग्रा हाल्छन् । तर, ती निश्चित सीमाबाट उम्कन चाहिँ सक्दैनन् । गति नहुनेको दुर्गती हुन्छ । यसैले कुर्सीमा कोही पनि सदाकाल बसिरहन सक्दैन । न त बसिराख्छु भनेरै बस्न पाउँछ । हो, कुर्सीबाट झार्ने र कुर्सीमा आफ्नालाई पार्ने खेल नै राजनीति हो । कुर्सीमा गति नभए पनि त्यसमा बस्नेको प्रगतिचाहिँ रोकिन्न । यसैले त कुर्सी नछोडी त्यसैमा सद्गति चाहने पनि छन् । नेता र कुर्सीको सम्बन्ध जीव र अजीवजत्तिकै छ । अर्थात्, जनतामाझ नेता जिउँदो जीव भएर जान्छ र जब जित्छ कुर्सीमा बसिसकेपछि निर्जीवजस्तै हुन्छ । यो अजीव हुँदै पुनः जीव बन्छ । अर्थात्, पुतली र झुसिलकीराजस्तै नेताको रूप जीवन प्रणाली सायद कमैले बुझ्छन् । जीवन दर्शनका दृष्टिले देखिएको सत्य होइन । राजनीतिमा सत्य झूट र झूट सत्य हुने कारण नै सफेद झूट हो । अर्थात्, अर्थलाई निरर्थ र निरर्थलाई अर्थपूर्ण पार्ने नै राजनीति हो ।
नेताको रूपलाई मानव विकासको अवस्थासँग जोड्न सकिन्छ । चुनावताका अवोध बालकझैँ माया पाउन लालायित बन्छ । अर्को बालस्वरूप नेतासँग कुस्ती पर्‍यो भने रोएर पनि जित्न खोज्छ । चुनाव जित्नेबित्तिकै ऊ वयस्कझैँ अरगिाँठे गज्जबको काँठे बन्छ । नजानेको कुरामा पनि यसरी भाषण छाँट्छ ।
मानौँ, ऊ नै सर्वत्र हो । फुकेको राँगोझैँ नेता यतिखेर गुन्डा बन्न पनि सक्छ । तर, जब खाँदा खाँदा भुँडी फुट्न खोज्छ, ऊ बिरामी पर्छ । बस्, भोगपछिको योग हेर्न लायक हुन्छ । उसको जति भुँडी बढ्छ, उति टाउको सानो बन्छ भन्ने कुरा सत्य सावित हुन्छ । अर्थात्, मूर्तिकारलाई नेताको मूर्ति बनाउन दुइटा बल भए पुग्छ । ठूलो बलमाथि सानो बल राखेपछि उसको सही सालिक बन्छ । उसको यो रूपमा मान्छेले केही लछारपाटो लगाउन नसके पनि कागले देखाइदिन्छ । उसका अनुयायी भए 'बिष्टा सफा आयोग' बन्ला ! नभए उसको रूप बिष्टामय बन्ला ! राजनीतिको उलटपलट भनेकै यही हो ।
नेताको यस्तो रूप देख्दादेख्दै मान्छेहरू नेतै हुन खोज्छन् । अझ गजब त कहाँ छ भने एउटा नेताले अर्को नेतालाई तिल बराबर गर्दैनन् । यस अर्थमा तिनलाई के कुराको ज्ञान हुँदैन भने बुहारी पनि सासू बन्छन् र सासू बन्नेबित्तिकै आफू बुहारी भएको बिर्सन्छन् । अझ् कुनै कुनै नेता छोरा जन्मिसक्दा पनि सधैँ आफू मात्र बाबु हो भन्ठान्छन् जबकि नाति निक्लिसकेको हुन्छ ।
वास्तवमा नेता बनाउने जनता भए पनि जनता बनाउने नेता कमै छन् । जनता र नेता अन्योन्याश्रति हुन् तबसम्म, जबसम्म नेता जनता बन्दैनन् र जनता नेता बन्दैनन् । नेताको नारा लगाएर खाने जनता र जनताको नारा लगाएर खाने नेतामा भिन्नता नदेखिए पनि जनताले नेताको नारा लगाउन छोडिसके पनि नेताले जनताको नारा लगाउन छोड्दैनन् ।
नेता दुई किसिमका मात्र छन् । एकथरी नेता अर्कालाई नाङ्गो पारेर आफू लुगा लगाउँछन् । अर्काथरी नेता आफू नाङ्गिएर अर्कालाई लुगा लगाइदिन्छन् । अर्कालाई नाङ्गो पारेर आफू लुगा लगाउने नेताले भोलि आफूलाई पनि नाङ्गो पार्छन् भन्ने कुरा बिर्सन्छन् । आफू नाङ्गिएर अर्कालाई लुगा लगाइदिने नेतालाई लुगाको खाँचो हुन्न भन्ने कुरा धेरै नेताको आत्मज्ञान हुन्न । नेतालाई नेता बनाउने जनता हुन् । तर, जनतामा पनि आत्मज्ञान नदेखेर नेताको सपना कहिल्यै साकार नपारेका हुन् । जनताको आत्मज्ञान भएको भए अब जनता सहिद हुने पालो पुग्यो, नेता हुनु पर्‍यो, नेता भन्नु पर्‍यो । जनता र नेतामा भिन्नता नै यही हो कि जनता सहिद बनेपछि नेता दरन्िछ । नेता सहिदै नबनी नेता दरन्िछ । अर्थात्, जनता सहिद भएर जिउँदो बन्छ । नेता जिउँदो भएर मरेतुल्य हुन्छ । यो सिद्धान्त त्यतिबेलासम्म लागू हुन्छ, जतिबेलासम्म नेता जनता बन्दैनन् र जनता नेता बन्दैनन् । अर्थात्, जनताले नेता बनाउँदैनन् र नेताले जनता बनाउँदैनन् ! नेता जननेता भन्दाभन्दै धननेता बनेको पत्तै हँुदैन । यसैले त नेता घैँटो हो भनेको । बुद्धिको बिर्को नउघारी घैँटोमा घाम के लाग्ला ?
मुटुभरि तिम्रै माया
तिमीले धेका दिएर त
पीर उस्तै उस्तै
फर्किंउँ साथी आफ्नै देशमा नाडी खियाउँन